UKUPHAKAMA KWEPHEPHA LANGASESE KUNYE NOMGAMA - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ukuphakama kwephepha langasese kunye noMgama
Ukuphakama kwephepha langasese kunye noMgama
Isikhokelo ekubekweni kobude bephepha langasese kunye nomgama, kubandakanya imilinganiselo yokuhlambela esemgangathweni yezona ziphumo zihle. Ukubekwa ngokufanelekileyo komnini wephepha langasese kunokubonakala ngathi kuyinto encinci, kodwa ukufumana imilinganiselo ngokuchanekileyo kubalulekile. Nantsi eyona milinganiselo iqhelekileyo yokuqinisekisa ukubonakala kakuhle nokufanelekileyo.
Bungakanani umphakamo ophethe iphepha langasese?
Ukuphakama kwephepha langasese le-ADA
Ungayibeka kude kangakanani into yokuhambisa iphepha langasese kwindlu yangasese
Kufuneka abekwe phi umnini wephepha langasese?
Ngaba abaphathi bephepha langasese babungakanani obuqhelekileyo?
Ungasifaka njani isiphatho sephepha langasese?
Uwuxhoma phi umnini wephepha langasese kwindlu yangasese encinci?
Ukuphakama kwesiphatho sephepha langasese kufuneka kube malunga nee-intshi ezingama-26 ukusuka kumgangatho ogqityiweyo. Oku kuvumela ukufikelela ngokulula.
Oku kunokutshintshwa ngokusekwe kwizinto ezisendleleni kunye nokuphakama kwabasebenzisi bendawo. Oku kuphakama yeyona nto ikulungeleyo ukufikelela xa uhleli kwindlu yangasese.
Iimfuno ze-ADA ekuphakameni kwabanini bephepha langasese kukuba kufuneka okungenani babe zi-intshi ezingama-19 ngaphezulu komgangatho kwaye bangabi ngaphezulu kwe-intshi ezingama-36 ngaphezulu komgangatho.
Lo ngumgama oqhele ukusetyenziswa kakhulu kuseto lwentengiso njengoko kulandelwa imigaqo. Ukuba kunokwenzeka ukuba umntu othile ekhayeni lakho abe nokukhubazeka kungangcono ukuthobela iimfuno ze-ADA njengoko kuya kuba kokonwaba kubo.
Owona mgama ubalaseleyo wokubeka umnini wephepha langasese ubuninzi bonyawo olunye (12 ″) kwisitya.
Oku kuhlala kungobude bengalo yomntu ohleli kwindlu yangasese, efuna ukusebenzisa iphepha langasese. Oku kungatshintsha kancinci ngokusekwe kubungakanani babasebenzisi.
Olona hlobo lusebenzisekayo lokusetyenziswa kwesiphathi sephepha langasese kukho imigaqo embalwa ekufuneka ilandelwe.
Isiphatho sephepha langasese kufuneka sibekwe eludongeni malunga nee-intshi ezi-8 ukuya kwii-intshi ezili-12 kwicala lesitya sangasese.
ubuhlobo obuhle kuye
Oku kungatshintsha ngokusekwe kubude kunye nengalo yomsebenzisi okhethiweyo. Ngokwesiqhelo iya kusetyenziswa sisixa esikhulu sabantu bobume obahlukeneyo kunye nobungakanani ukuze ukubetha embindini kufanelekile.
Ngokuphakama, umnini wephepha langasese kufuneka alale malunga nee-intshi ezingama-26 ngaphezulu komgangatho kwezona zicelo zisemgangathweni, kodwa kwakhona unokutshintsha ngokusekwe kubude beengalo.
Abaphathi bephepha langasese banobukhulu obahlukeneyo obunokukhethwa. Oku kuvumela ubungakanani obahlukeneyo beeroli ukuba zibeke abanini bazo.
Uninzi lweesetingi zokuhlala zinomqolo omnye oqhelekileyo, kodwa kukho ezinye ezinokufuna isiphatho sephepha langasese lesikhulu lejumbo. Ngokusekwe kubungakanani beeroli oceba ukuzithenga kufuneka zichonge uhlobo lwephepha langasese olithengileyo.
Umntu ophethe iphepha langasese kufuneka axhonywe ngokuchanekileyo ukuvumela ukusetyenziswa ngokukuko. Kukho amanyathelo ambalwa akhawulezayo nalula okufumana ufakelo olufanelekileyo. Ukufakwa kwesiphatho sephepha langasese yinto elula yokwenza ngokwakho iprojekthi remodel yokuhlambela .
-Inyathelo lokuqala lokufakela umnini wephepha langasese kukulinganisa indawo ukusuka kwindlu yangasese ukuya apho ufuna ukuba umniniyo aye kuyo. Ngokwesiqhelo ukusuka kwi-8 ukuya kwi-12 ″ kude.
-Inyathelo lesibini kukuqinisekisa ukuba unenqanaba elifanelekileyo ukuze uqiniseke ukuba izikrufu zilungelelaniswe ngokuchanekileyo ukuze kufakwe isiphatho sephepha langasese.
ujessica caban kunye no-bruno mars bayazibandakanya
-Inyathelo lesithathu kukugrumba imingxunya kunye nokujijisa izixhobo zekhompuyutha ngokubamba indawo ekhethiweyo.
-Inyathelo lesine kukuvula umniniyo kwaye ujije kuso nasiphi na isikroba esinokubakho kumnini wephepha langasese.
Ukusuka apho iyakulungela iphepha langasese kunye nokusetyenziswa!
Ngamanye amaxesha, njengoko kuchaziwe apha ngezantsi, ukufaka iphepha elinendawo yangasese kunokuba lula kakhulu, njengoko zisetelwe endaweni.
Kweminye imimandla akukho sithuba saneleyo sodonga sokubeka udonga oluxhonywe ngephepha langasese. Endaweni yoko oku kunokuthetha ukusebenzisa isiphathamandla esiphethe iphepha lokuya ngasese okanye ibhaskithi, ishelufu okanye indawo yokugcina izinto ngasemva kwendlu yangasese.
ubopha njani iti
Ukuba loo nto ayinasithuba saneleyo kwigumbi lakho lokuhlambela elincinci, kukho iindlela zokukhetha ngaphezulu kweetanki izindlu zangasese eziluncedo kakhulu kwiindawo ezixineneyo! Ikwavumela ukuba kubekwe imiqulu eyongezelelweyo.
Ukuba sele unodonga oluxhonyiweyo kwaye ungathandi ukutshintsha kukhetho olwahlukileyo, isenokubakho indawo yokuxhoma.
Ngelixa kukho imfuneko ye-ADA kunye nesikhokelo esinconyelwayo sokusetyenziswa ngokukuko, oku kwaye akufuneki kumakhaya okuhlala.
Indawo inokubakho naphi na apho ukhethe khona kwaye yintoni efanelekileyo (okanye eyinyamezelayo) kuwe. Ukukhetha ukuxhoma ngaphandle kwengcebiso yobude kunye nomgama akunyanzelekanga.
Ukubeka umnini kufutshane nangaphezulu kufutshane nesitya kulungile kwindawo yokuhlambela encinci, ukuba nje umsebenzisi unokufikelela.
Nazi Isoftware yokulungisa indawo yangasese iiapps ezinokukunceda ukujonga ngoyilo kunye noyilo ngaphambi kokuba wenze nawuphi na umsebenzi wokwenyani. Oku kunokuba luncedo ngakumbi xa usebenza nencinci ubume bokuhlambela .
enxibe mnyama emtshatweni
iikhikhini ezincinci iikhabhathi ezimhlophe
ivesi yebhayibhile ngamadoda nabafazi
unxiba njani iringi yokuzibandakanya